कविताः धेरै कस्नु हुन्न माया - Everest Dainik - News from Nepal
कविताः धेरै कस्नु हुन्न माया
धेरै कस्नु हुन्न माया
डोरी बनी गाँठो पर्ला ?
समयमा भेट नहुँदा
गहबाट आँशु झर्ला ।
अभावै अभावले दिनरात
सहारा विहीन हुनसक्छ ?
विचार गर है बेलैमा
कतै पाइला अन्तै सर्ला ।
देखाउँदै किन हिँड्ने
मनको माया मनमा राख
समाजलाई नचिनाउ है ?
नंग्याउँदा रुनु पर्ला
आँखाबाट आसु झर्ला ।।
याे पनि पढ्नुस मुक्तक : सारा जीवन तड्पिएरै समर्पण गर्नैपर्ने !
विद्या भण्डारी, सामाखुसी ।